Sintomy Robin DR400 Regent FS2004 - Freeware
Add-on ny tsara kalitao amin'ny 2D takelaka ary feno VC, izany fiaramanidina dia atolotra amin'ny tsy manam-paharoa fanamian'ny voasoratra anarana ny F-GNNK. Ny ankamaroan'ny Frantsay mpanamory, fara fahakeliny, mety manana ora vitsy ao amin'ny Robin DR.400 tahaka ny fiaramanidina miely patrana indrindra amin'ny fampiasana manidina sekoly any.
Modeling Yannick Lavigne, Fred Banting baikoina fitaovana sy Rob Young efa lasa ny sidina valopy.
Fampifanarahana ny maso modely for FS2004 by Eric Dantès
fampifanarahana ny sidina modely for FS2004 by Jean-Pierre olona antonontonony amny'ny mpia
Description ny tena fiaramanidina :
Ny Robin DR400 dia hazo fanatanjahan-tena monoplane, nanan-anaka tamin'ny Robin sy Jean Pierre Délémontez. Ny Robin DR400 nanidina tany 1972 voalohany, ary mbola ao amin'ny famokarana in 2008. Manana bisikileta misy kodiarany telo undercarriage, ary afaka mitondra olona efatra. Ny DR400 fiaramanidina manana ny 'cranked elatra' fanahafana, izay ny dihedral fiolahana ny ivelany dia be elatra lehibe noho ny inboard, ny fanahafana izay hizara Jodel fiaramanidina. Io modely Heverina mora ny hanidina maro sy milamina nandritra ny fiaramanidina noho ny hazo filanjana azy.
Ny Robin DR300 andian dia fivoaran'ny ny teo aloha DR.221 Dauphin sy DR.250 Capitaine amin'ny bisikileta misy kodiarany telo fipetrahana fitaovana. Ny voalohany dia ny DR340 Variant Major, bisikileta misy kodiarany telo fipetrahana fitaovana dikan-tenin'ny DR250 Capitaine izay nanidina voalohany tamin'ny Febroary 27 1968, nanaraka tamin'ny 21 March 1968 ny DR315 Petit Prince, bisikileta misy kodiarany telo fipetrahana fitaovana dikan-tenin'ny DR221 Dauphin. Ny DR315 tatỳ aoriana nosoloina ny DR300. Ao 1972 ny fanatsarana dika, ny DR400 dia nampidirina tamin'ny handroso-sliding eloelo.
Ny elatra dia miavaka endri-javatra ny Robin DR400, ary avy hatrany no mampisaraka fiaramanidina ity maso avy amin'ny hafa toy izany koa mazava fiaramanidina. Izany dia derivative ny teo aloha Jodel teti-dratsy, dia mazava, mafy sy mahery, ny dihedral ny kobany ivelany mampita Mitana lateral filaminana mandositra. Amin'ny maha lamba nanarona, dia manolotra ny malamalama ambonin'ny mba hanampy airflow, hiahotra ny mahazatra takela-barahina nifanindritsindry kobany na rivets hita ao amin'ny metaly fiaramanidina. Ny zava-miafina ny DR400 somary ambony ny fampisehoana mifototra amin 'ny nanambara ny washout ao amin'ny ivelany kobany. Koa satria manana zoro ambany ny fanafihana ny airflow noho ny foibe fizarana, dia mamorona kely tarihiny amin'ny Cruise sidina. Izany toetra ihany koa fa mahasoa imbues fihinanam-bilona fitondrantena sy ny DR400 noho izany no tsy hamela amin'ny tokony hametraka Retro-fanamboarana toy ny fitarihana lelan am ravin. (Wikipedia)
Downloads 9 610
Noforonina 20 Mar 2013
Nohavaozina taminy 21 Mar 2013
Yannick Lavigne, Fred Banting, Rob Young, Eric Dantès, Jean-ierre olona antonontonony amny'ny mpia